Guddoonka Aqalka Sare Oo La Kulmay Madaxa AMISOM | Raascawad
Guddoonka Aqalka Sare Oo La Kulmay Madaxa AMISOM
Muqdisho(Raascawad Media)_War Saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in xubno ka socday Golaha Aqalka Sare ay kulan la qaateen Taliska ugu sarreeya ee AMISOM.
Xubnahani uu horkacayay guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS Cabdi Xashi C/laahi ayaa lagu sheegay warkan in ay ka doodeen arrimo ay ka mid tahay ammaanka iyo hab dhaqanka Ciidamada AMISOM.
Kulanka oo ahaa mid Albaabada uu u xiranaa ayaa waxaa gudgoomiyaha ku wehlinayay gudgoomiye ku xigeenka koobaad ee Aqalka Sare Abshir Maxamed Axmed ( Buqaari ), guddoomiye ku xigeenka Mowliid Xussein Guhaad iyo iyo Xoghayaha guud ee Golahaasi Cali Maxamed Jaamac.
U qaabilsanaha Midowga Africa ee Soomaaliya Ambassdor Franciska Madeira ayaa sheegay in ay isku afgarteen waxyaabihi ay ka wada hadleen xubnaha ka socday Baarlamaanka Aqalka sare ee Soomaaliya
Dhankiisa guddoomiye Cabdi Xaashi C/laahi ayaa uga mahaceliyay AMISOM howlaha nabadeynta ah ee ay ka wadaan gudaha Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin kulanka ay la qaateen Madaxa ugu sarreeya ee AMISOM.
Kulankan ayaa yimid, kadib markii dhawaantani Ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM is hor istaag ay ku sameeyeen guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/laahi, xilli uu doonayay in uu ka dhoofo Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.